HomeWararka CiyaarahaManchester City oo kula xifaaltameysa Manchester United saxiixa Pau Torres ee Villarreal
Manchester City ayaa lagu soo waramayaa inay diyaar u tahay inay kula tartanto Manchester United saxiixadaafaca dhexe ee Villarreal Pau Torres xagaagan.
Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Spain ayaa sanadkii hore la soo Dhaafay Jaallaha Submarine-ka ah, waxaana uu ku dhameystay xilli ciyaareedkii 2020-21 isagoo ku guuleystay koobka Europa League.
Torres ayaa sii waday horumarkiisa Unai Emery xilli ciyaareedkan, waxaana uu ahaa mid kale oo muhiim u ah mashiinka Villarreal kaasoo u gudbay semi-finalka Champions League.
25 jirkaan ayaa soo afjaray xilli ciyaareedkii 2021-22 isagoo u saftay 47 kulan tartamada oo dhan Villarreal, isagoo u dhaliyay lix gool islamarkaana caawiye ka ahaa hal gool.
Torres ayaa sidoo kale ciyaaray daqiiqad kasta ololaha Champions League ee Villarreal ka hor inta aysan u bixin Liverpool afar dhamaadka, waxaana loo maleynayaa inuu waqti dheer bartilmaameed u ahaa Man United.
Si kastaba ha ahaatee, Sport ayaa sheeganeysa in kooxda dhawaan loo caleemo saaray horyaalka Premier League ee Man City aysan ka rajo dhigin inay daafaca dhexe ku soo biiraan Etihad Stadium xagaagan.
Warbixintu waxay intaa ku dartay in Villarreal ay isku diyaarinayso rajada ah in ay bilaabato xilli ciyaareedka 2022-23 oo uu ka maqan yahay Torres, kaas oo heshiiskiisa La Ceramica uu ka harsan yahay kaliya laba sano.
Tottenham Hotspur ayaa la filayay inay ku guuldareysatay €50m (£42.3m) oo ay u soo bandhigtay Torres sannadkii hore, laakiin Lilywhites ayaa hadda dib u soo celin karta xiisahooda ka dib markii ay u soo baxeen Champions League.
Intaa waxaa dheer, Chelsea – oo isku diyaarineysa inay macsalaameyso Antonio Rudiger iyo Andreas Christensen xagaagan – ayaa sidoo kale laga yaabaa inay u dhaqaaqdo Torres haddii ay soo jeedintooda ku qabsoonto waqtiga.
Torres ayaa ciyaaray 90-kii daqiiqo ee ciyaarta iyadoo Villarreal ay 2-0 uga badisay Barcelona ciyaar ka dhacday Camp Nou maalintii ugu dambeysay ee xilli ciyaareedka La Liga Axadii, waana kulankii 134aad ee Jaallaha hoostiisa tan iyo markii uu ka soo kacay heerka dhalinyarada.
Torres ayaa dhaliyay 11 gool iyo shan caawin si uu ugu faano Villarreal heerka sare, kooxda Emery ayaana ku dhameysatay kaalinta 7aad ee kala sareynta ka dib guushii ay ka gaareen La Blaugrana taasoo ka dhigtay wareega isreebreebka koobka Europa League.
Man City ayaa la tacaaleysay dhaawacyo ay soo gaareen Aymeric Laporte , John Stones iyo Ruben Dias dhowrkii todobaad ee ugu dambeeyay xilli ciyaareedka, inkastoo kaliya kan dambe uu ka maqnaa kulankii ay guusha ka gaareen Aston Villa, halka Fernandinho uu ciyaaray kulankiisii ​​​​ugu dambeeyay. naadiga.
Dhanka kale, Man United waxa ay u dejin doontaa isbedel weyn xagaagii uu hogaaminayay Erik ten Hag , kaasoo tarabuunka ugu jiray daawashada Red Devils guuldaradii 1-0 ka soo gaartay Crystal Palace ee Selhurst Park.